Xisaabinta Daruuraha - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Adeegga Xisaabinta Daruuraha
ICloud Computing waa marin u helida adeegyada xisaabinta inta ka badan Internet. Adeegyadani waxay isugu jiraan kaabayaal heer sare ah ilaa ay dhamaystiraan SaaS (Software Adeeg ahaan) xalal. Cloud adeeg bixiyayaasha ayaa ka caawiya ganacsiyada in ay diirada saaraan hawlahooda asaasiga ah iyaga oo la tacaalaya dhammaan shuruudaha kaabayaasha. Maanta, shakhsiyaadka badankood waxay heli karaan nooc ka mid ah daruur xalalka sida iimaylka, ciyaaraha, filimada, muusiga, sawirada, dukumentiyada, adiga ayaa magacaabey. Adeegyada kala duwan ee laga heli karo daruur waa ballaaran. Cloud xalalku waxay si dhakhso ah u noqonayaan doorashada la door biday ee ganacsiyada wax ka qabta baahiyo badan oo xisaabinta. Adeeggan wax-ku-oolka ah waa uu horumaray daruur xisaabinta xal ku habboon labada shirkadood iyo shakhsiyaadba.
Muhiimadda Xalka Xisaabinta Daruuraha
Cloud kombuyuutarku waa mid aad loo miisaaman karo, la qabsan karo oo la maarayn karo. Waxay ka badbaadisaa shirkadaha inay maalgashadaan kaabayaasha gudaha iyo dib u habeynta lacagahan si ay u wanaajiyaan una kobciyaan ganacsigooda. Cloud xisaabinta waxay ka caawisaa shirkadaha iyo MNC-yada inay dhimaan kharashaadka ku baxa maaraynta iyo cusboonaysiinta kaabayaasha jira ee koritaanka iyo horumarka mustaqbalka. Gaashaanle daruur bixiyeyaasha adeegga waxay bixiyaan xisaabinta baahida loo qabo iyo autoscaling. Tani waxay u sahlaysaa macaamiisha inay kor u qaadaan ama hoos u dhigaan shuruudaha xisaabinta marka loo baahdo. Qaabkan qiimaha lagu bixiyo-sida-aad-goyso waxa uu bixiyaa dabacsanaan aad u weyn waxa uuna ka caawiyaa in uu daboolo kororka mudada gaaban ee ganacsiyada.